ISomalia imemezela isimo senhlekelele kazwelonke ngenxa yesomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa imvamisa nobude besomiso. Amazwe amaningi amemezela izexwayiso ngenxa yokushoda kwamanzi futhi aqala ukukhulisa izinhlelo zokusebenza lapho kubhekene nokuntuleka kwamanzi ehlobo elizayo.
1 Inhlekelele Yesizwe
2 Abantu abathintekile
UMongameli waseSomalia, UMohamed Abdullahi Farmaajo, Umemezele isimo "senhlekelele kazwelonke" ukuthi sikwazi ukubhekana nesimo sokushoda kwamanzi esidalwe yisomiso esibi esihlupha ingxenye enkulu yezwe. Ebhekene nesomiso esilingana nalokhu, abaphathi kumele bathuthele ezindleleni zokonga amanzi ngokweqile. Ukuncishiswa nokuqedwa kokuhlanzwa emgwaqweni, ukusikeka kwamanzi, ukunciphisa ingcindezi, njll.
UMohamed wenze ukuvusa umphakathi waseSomalia ukuthi uphendule ngokushesha kulezi zinhlekelele. Ukuntuleka kwamanzi akugcini ngokuholela ebuphofini, kodwa kwanda izifo, indlala, njll. Ngaphezu kwalokho, ucele osomabhizinisi ezweni lakhe kanye nabantu baseSomalia abasekudingisweni ukuthi babambe iqhaza emisebenzini yokuvuselela izindawo ezithintekile.
Balinganiselwa ezigidini ezintathu abantu baseSomaliya abathintekayo kulesi somiso futhi bazoba sesimweni esiphuthumayo sokudla ngenyanga kaJuni 2017. Lokhu kungadala indlala engxenyeni enkulu yezwe ngenxa yokushoda kwamanzi okunisela nezitshalo.
Umongameli uhlala ethola imibiko ngokuhlolwa nempendulo okumele abe nayo esimeni esinjalo esiphuthumayo. Isomiso sesihambile kubantu abangaphezu kwe-135.000 eSomalia kusukela ngoNovemba, ngokusho kwedatha eqoqwe yi-UN Refugee Agency (UNHCR) kanye neNorway Refugee Council (NRC).
Izinhlangano zomhlaba wonke zesaba ukuthi lesi simo sesomiso esibi kakhulu sizodala indlala ezodala babalelwa ku-250.000 2011 abantu abashona njengoba kwenzeka ngo-XNUMX.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » ISomalia imemezela isimo senhlekelele kazwelonke ngenxa yesomiso